လုံးဝမစားသင့်သော ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခု - CeleLove
လုံးဝမစားသင့်သော ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခု
February 13, 2020 CeleLove ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ 0
“အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက်၊ အရွက်မှာ လက်ဖက်” ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ဝက်သားဟာ လူးတွေ နေ့စဉ်စားသုံးကြတဲ့ အသားတွေထဲမှာ အရသာရှိတဲ့ ထိပ်တန်းအသားတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။
ဒါပေမယ့် ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခုကတော့ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ် …။
ဝက်ဟာ ခေါင်းဖျားကနေ အမြီးထိ အားလုံးစားလို့ရပေမယ့် မစားသင့်ပဲ ချန်လှပ် (သို့) သတိထားပြီး စားရမယ့် အစိတ်အပိုင်း (၅) ပိုင်းကတော့ ….
သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာတော့ ဝက်သွေးက ထိပ်ဆုံးစာရင်းကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဝက်သွေးဟာ ကျန်းမာတဲ့ ဝက်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဆိုရင်တော့ အသုံးတည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါကြောင့် သေသွားတဲ့ ဝက်တွေ ဒါမှမဟုတ် မလတ်ဆတ်တော့တဲ့ သွေးတွေကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဝက်သွေးတွေဟာ အန္တရာယ် ရှိပါတယ် …။
ဝက်သွေးမှာ အဆိပ်အတောက်များစွာပါဝင်တာမို့ သေသေချာချာ ကျက်အောင် ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ် မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မကျက်တကျက် (သို့) အစိမ်းအတိုင်း စားမယ်ဆိုရင်တော့ အလွန် အန္တရာယ်များပါတယ် …။
၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ နီခရိုဆစ် လို့ခေါ်တဲ့ လူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကလီစာတွေ ဆဲလ်တွေ ပျက်ဆီးလာတဲ့ ဝေဒနာရှင် ၉ ဦးမှာ အချို့သေဆုံးခဲ့ပြီး အချို့က ခြေလက်အင်္ဂါတွေ ဖြတ်တောက်ပစ်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒီလူတွေဟာ ရောဂါရှိတဲ့ ဝက်က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဝက်သွေးတွေ စာသုံးပြီးဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဆရာဝန်တွေက လူထုကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ သတိပေးခဲ့ရတဲ့ထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် …။
အသည်းဟာ အဆိပ်အတောက်တွေ ထုပ်လုပ်ပေးတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်အသည်းမှာ ကိုလက်စထရောနဲ့ သံဓါတ်အပြင်းစားတွေ ပါဝင်ပါတယ် …။
အကယ်၍ အဟာရဓာတ်ပြည့်ဝအောင် ဝက်အသည်းကို ပုံမှန်စားတယ်လို့ ခံယူထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအယူအဆဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ ဝက်ရဲ့အသည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသည်းကလည်း အတူတူမို့ အများကြီး မစားသင့်ပါဘူး …။
အသည်းရဲ့ တာဝန်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို စွန့်ပစ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အဆိပ်တွေအပြင် သတ္တုဓာတ်အပြင်းစားတွေ ဘက်တီးရီယားတွေကြောင့် ပုံမှန်စားသောက်မယ်ဆိုရှင် ရေရှည်မှာ အတွင်းကလီစာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်မားပါတယ် …။
အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ အားနည်းသူ ရောဂါအခံရှိသူတွေအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်း အသည်းကို အများကြီး မစားသင့်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဟာရဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်သာ သတိနဲ့ ချင့်ချိန် စားသုံးပါ …။
ဝက်ရဲ့ အဆုတ်ဟာ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ အညစ်ကြေးများစွာ ပါရှိနေပါတယ်။ အဆုပ်ဟာ လေဝင်လေထွက်အတွက် တာဝန်ယူရတာမို့ များသောအားဖြင့် မြေကြီးနဲ့ ဝက်ရဲ့ နှာခေါင်းဟာ ထိစပ်နေတဲ့အတွက် အညစ်အကြေးတွေ နေ့စဉ် ရှုသွင်းခံရတဲ့ အစိတ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။
အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေနဲ့ နာတာရှည်သမားတွေ ဝက်အဆုပ်ကို မစားသင့်သလို ကျန်းမာရေးကောင်းသူတွေ အနေနဲ့လည်း အများကြီး မစားသင့်ပါဘူး …။
အမှန်အတိုင်းဆိုရသော် ဝက်အူဟာ အညစ်ပတ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ အစာမချေရသေးတဲ့ အစာတွေ သိုလှောင်ရာနေရာဖြစ်ပါတယ် …။
ဒါကြောင့်မို့ ဝက်အူမှာ မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ပေါက်ပွား ပျော်ရွှင်ရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။
ဝက်အူကို စနစ်တကျ ကျက်အောင် မချက်ပြုတ်ပဲ စားမိပါက ဘက်တီးရီးယားတွေ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်ပြီး ရောဂါတွေ အန္တရာယ်တွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်အူဟာ ဂေါက်ရောဂါ၊ ပန်ကရိယ၊ အသည်းအဆီဖုံးနဲ့ အဝလွန်ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် …။
လူအတော်များများနဲ့ မိခင်တွေ မှားယွင်းနေတဲ့ အယူအဆတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဝက်ဦးနှောက်စားရင် ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်ကောင်းတယ်၊ အားရှိတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ဒီအယူအဆနဲ့ ကလေးတွေကို ဝက်ဦးနှောက်များများကျွေးမိရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ် …။
တစ်ကယ်တော့ ဝက်ဦးနှောက် စားသုံးခြင်းက လူတွေ ထင်နေကြသလို လူရဲ့ဦးနှောက်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝက်ဦးနှောက် အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့် ကလေးတွေမှာ အဝလွန်ရောဂါ၊ သွေးတွင်း ကိုလေက်စထရောများခြင်းနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေကို ဖြစ်စေပါတယ် …။
ဘာကြောင့်လဲဟု ဆိုရသော် ဝက်ရဲ့ဦးနှောက်ဟာ အဟာရဓါတ် အလွန်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဝက်ဦးနှောက် ၁၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်မှာ ၂၅၀၀ မီလီဂရမ် ကိုလက်စထရောပါဝင်တာကြောင့် ဒီပမာဏဟာ လူတစ်ယောက် တစ်နေ့တာမှာ တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့ အဟာရပမာဏထက် ၈ ဆ ပိုများတဲ့အတွက် တန်ဆေးလွန်ဘေး ဆိုသလိုအန္တရာယ်ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ဒါကြောင့်မို့ ဝက်သားကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အထူးသဖြင့် အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်တဲ့ ကြေးအိုးလို၊ ဝက်သားတုတ်ထိုး အစားအစာများ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ သင့်တင့်မျှတစွာ ကျန်းမာရေးသတိနဲ့ စားသုံကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော် …။ ။
လေးစားစွာဖြင့်ခရစ်ဒက် — ပိုပိုလေး
လုံးဝမစားသငျ့သော ဝကျသားရဲ့ အစိတျအပိုငျး (၅) ခု
“အသီးမှာ သရကျ၊ အသားမှာ ဝကျ၊ အရှကျမှာ လကျဖကျ” ဆိုရိုးစကားအတိုငျး ဝကျသားဟာ လူးတှေ နစေ့ဉျစားသုံးကွတဲ့ အသားတှထေဲမှာ အရသာရှိတဲ့ ထိပျတနျးအသားတဈမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ …။
ဒါပမေယျ့ ဝကျသားရဲ့ အစိတျအပိုငျး (၅) ခုကတော့ လူတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အန်တရာယျရှိနိုငျတာမို့ ဖွဈနိုငျရငျ ရှောငျကဉျြကွဖို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ တိုကျတှနျးထားပါတယျ …။
ဝကျဟာ ခေါငျးဖြားကနေ အမွီးထိ အားလုံးစားလို့ရပမေယျ့ မစားသငျ့ပဲ ခနျြလှပျ (သို့) သတိထားပွီး စားရမယျ့ အစိတျအပိုငျး (၅) ပိုငျးကတော့ ….
သံဓါတျပါတဲ့ အစားအစာတှထေဲမှာတော့ ဝကျသှေးက ထိပျဆုံးစာရငျးကနေ ပါဝငျပါတယျ။ အကယျ၍ ဝကျသှေးဟာ ကနျြးမာတဲ့ ဝကျကနေ ထုတျလုပျထားတာဆိုရငျတော့ အသုံးတညျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရောဂါကွောငျ့ သသှေားတဲ့ ဝကျတှေ ဒါမှမဟုတျ မလတျဆတျတော့တဲ့ သှေးတှကေနေ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ဝကျသှေးတှဟော အန်တရာယျ ရှိပါတယျ …။
ဝကျသှေးမှာ အဆိပျအတောကျမြားစှာပါဝငျတာမို့ သသေခြောခြာ ကကျြအောငျ ခကျြပွုတျစားသောကျမယျဆိုရငျ အန်တရာယျ မဖွဈနိုငျပမေယျ့ မကကျြတကကျြ (သို့) အစိမျးအတိုငျး စားမယျဆိုရငျတော့ အလှနျ အန်တရာယျမြားပါတယျ …။
၂၀၁၇ ခုနှဈက ဗီယကျနမျနိုငျငံမှာ နီခရိုဆဈ လို့ချေါတဲ့ လူ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျတှငျးက ကလီစာတှေ ဆဲလျတှေ ပကျြဆီးလာတဲ့ ဝဒေနာရှငျ ၉ ဦးမှာ အခြို့သဆေုံးခဲ့ပွီး အခြို့က ခွလေကျအင်ျဂါတှေ ဖွတျတောကျပဈရတဲ့ ဖွဈရပျတှရှေိခဲ့ပါတယျ၊ ဒီလူတှဟော ရောဂါရှိတဲ့ ဝကျက ထုတျလုပျထားတဲ့ ဝကျသှေးတှေ စာသုံးပွီးဖွဈခဲ့တာမို့ ဆရာဝနျတှကေ လူထုကို ရှောငျကဉျြဖို့ သတိပေးခဲ့ရတဲ့ထိ ဖွဈခဲ့ပါတယျ …။
အသညျးဟာ အဆိပျအတောကျတှေ ထုပျလုပျပေးတဲ့ နရောဖွဈပါတယျ။ ဝကျအသညျးမှာ ကိုလကျစထရောနဲ့ သံဓါတျအပွငျးစားတှေ ပါဝငျပါတယျ …။
အကယျ၍ အဟာရဓာတျပွညျ့ဝအောငျ ဝကျအသညျးကို ပုံမှနျစားတယျလို့ ခံယူထားတယျဆိုရငျတော့ ဒီအယူအဆဟာ မှားယှငျးနပေါတယျ။ ဝကျရဲ့အသညျးမှ မဟုတျပါဘူး တိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့ အသညျးကလညျး အတူတူမို့ အမြားကွီး မစားသငျ့ပါဘူး …။
အသညျးရဲ့ တာဝနျဟာ ခန်ဓာကိုယျက အဆိပျအတောကျတှကေို စှနျ့ပဈပေးရတာဖွဈပါတယျ။ အသညျးမှာ ရှိနတေဲ့ အမြိုးမြိုးသော အဆိပျတှအေပွငျ သတ်တုဓာတျအပွငျးစားတှေ ဘကျတီးရီယားတှကွေောငျ့ ပုံမှနျစားသောကျမယျဆိုရှငျ ရရှေညျမှာ အတှငျးကလီစာ ကငျဆာဖွဈနိုငျခြေ မွငျ့မားပါတယျ …။
အသကျအရှယျကွီးသူတှနေဲ့ သှေးကွောဆိုငျရာ အားနညျးသူ ရောဂါအခံရှိသူတှအေတှကျ အဆိပျအတောကျဖွဈဖို့ ပိုပွီးလှယျကူပါတယျ။ ပုံမှနျအတိုငျး ကနျြးမာရေးကောငျးသူတှအေနနေဲ့လညျး အသညျးကို အမြားကွီး မစားသငျ့ပါ။ ကိုယျ့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အဟာရဖွဈစနေိုငျလောကျအောငျသာ သတိနဲ့ ခငျြ့ခြိနျ စားသုံးပါ …။
ဝကျရဲ့ အဆုတျဟာ ဘကျတီးရီးယားနဲ့ အညဈကွေးမြားစှာ ပါရှိနပေါတယျ။ အဆုပျဟာ လဝေငျလထှေကျအတှကျ တာဝနျယူရတာမို့ မြားသောအားဖွငျ့ မွကွေီးနဲ့ ဝကျရဲ့ နှာခေါငျးဟာ ထိစပျနတေဲ့အတှကျ အညဈအကွေးတှေ နစေ့ဉျ ရှုသှငျးခံရတဲ့ အစိတျပိုငျးလညျး ဖွဈပါတယျ …။
အသကျအရှယျကွီးသူတှနေဲ့ နာတာရှညျသမားတှေ ဝကျအဆုပျကို မစားသငျ့သလို ကနျြးမာရေးကောငျးသူတှေ အနနေဲ့လညျး အမြားကွီး မစားသငျ့ပါဘူး …။
အမှနျအတိုငျးဆိုရသျော ဝကျအူဟာ အညဈပတျဆုံးအစိတျအပိုငျးဖွဈပါတယျ။ ဝကျရဲ့အညဈအကွေးတှနေဲ့ အစာမခရြေသေးတဲ့ အစာတှေ သိုလှောငျရာနရောဖွဈပါတယျ …။
ဒါကွောငျ့မို့ ဝကျအူမှာ မကျြစိနဲ့မမွငျရတဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးမှားပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျ ပေါကျပှား ပြျောရှငျရာနရောလညျး ဖွဈပါတယျ …။
ဝကျအူကို စနဈတကြ ကကျြအောငျ မခကျြပွုတျပဲ စားမိပါက ဘကျတီးရီးယားတှေ လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲ ရောကျပွီး ရောဂါတှေ အန်တရာယျတှေ ပေးနိုငျပါတယျ။ ဝကျအူဟာ ဂေါကျရောဂါ၊ ပနျကရိယ၊ အသညျးအဆီဖုံးနဲ့ အဝလှနျရောဂါတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ …။
လူအတျောမြားမြားနဲ့ မိခငျတှေ မှားယှငျးနတေဲ့ အယူအဆတဈခုရှိပါတယျ။ ဝကျဦးနှောကျစားရငျ ဦးနှောကျဉာဏျရညျကောငျးတယျ၊ အားရှိတယျ ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။ ဒီအယူအဆနဲ့ ကလေးတှကေို ဝကျဦးနှောကျမြားမြားကြှေးမိရငျတော့ မှားပါလိမျ့မယျ …။
တဈကယျတော့ ဝကျဦးနှောကျ စားသုံးခွငျးက လူတှေ ထငျနကွေသလို လူရဲ့ဦးနှောကျကို အထောကျအပံ့ဖွဈစတေယျဆိုတာ မဟုတျပါဘူး။ ဝကျဦးနှောကျ အလှနျအကြှံစားခွငျးကွောငျ့ ကလေးတှမှော အဝလှနျရောဂါ၊ သှေးတှငျး ကိုလကျေစထရောမြားခွငျးနဲ့ နှလုံးရောဂါတှကေို ဖွဈစပေါတယျ …။
ဘာကွောငျ့လဲဟု ဆိုရသျော ဝကျရဲ့ဦးနှောကျဟာ အဟာရဓါတျ အလှနျကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ဝကျဦးနှောကျ ၁၀၀ ဂရမျအလေးခြိနျမှာ ၂၅၀၀ မီလီဂရမျ ကိုလကျစထရောပါဝငျတာကွောငျ့ ဒီပမာဏဟာ လူတဈယောကျ တဈနတေ့ာမှာ တဈကယျလိုအပျတဲ့ အဟာရပမာဏထကျ ၈ ဆ ပိုမြားတဲ့အတှကျ တနျဆေးလှနျဘေး ဆိုသလိုအန်တရာယျရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
ဒါကွောငျ့မို့ ဝကျသားကွိုကျနှဈသကျသူတှေ အထူးသဖွငျ့ အဆိုပါ အစိတျအပိုငျးမြားစှာ ပါဝငျတဲ့ ကွေးအိုးလို၊ ဝကျသားတုတျထိုး အစားအစာမြား ကွိုကျနှဈသကျသူတှေ သငျ့တငျ့မြှတစှာ ကနျြးမာရေးသတိနဲ့ စားသုံကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော …။ ။
လေးစားစှာဖွငျ့ခရဈဒကျ — ပိုပိုလေး
အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးငွေစုနည်း (၃) မျိုး